Iyo Big switch uye Bluelock | Martech Zone
Mavhiki mashoma apfuura ndakatanga kuverenga Iyo Big switch na Nicholas Carr. Heino chidimbu kubva saiti yakafa pa:
Makore zana apfuura, makambani akamira kuburitsa simba rawo neinjini dzemhepo uye dynamos ndokubaya mugridhi yemagetsi ichangobva kuvakwa. Simba rakachipa rakaputirwa kunze nemagetsi zvinoshandiswa hazvina kungochinja mashandiro emabhizinesi. Iyo yakagadzika cheni yekuita yezvehupfumi uye yemagariro shanduko yakaunza iyo yazvino nyika ivepo. Nhasi, shanduko yakafanana iri kuitika. Yakanamatira kune yeInternet yepasi rose komputa grid, hombe ruzivo-rwekugadzirisa matangi atanga kupomba data uye software kodhi mudzimba medu nemabhizinesi. Ino nguva, iri komputa iri kushanduka kuita chinoshandiswa.
Iko kuchinja kuri kutogadzirisazve indasitiri yemakomputa, kuunza vakwikwidzi vatsva vakaita seGoogle uye Salesforce.com kumberi nekutyisidzira varwi vakaita saMicrosoft naDell. Asi mhedzisiro ichawedzera zvakanyanya. Yakachipa, yekushandisa-yakapihwa komputa inozopedzisira yachinja nzanga zvakanyanya sekudhura kwemagetsi. Isu tava kutoona yekutanga mhedzisiro? mukuchinja kwekutonga nhepfenyuro kubva kumasangano kuenda kune vanhu, mumakakatanwa pamusoro pekukosha kwekuvanzika, mukutengeswa kwemabasa evashandi vezivo, kunyangwe mukuwedzera kwehupfumi. Sezvo ruzivo rwekushandisa rwunowedzera, shanduko dzinongo wedzera, uye kumhanya kwavo kunongokurumidza.
Iyo Big switch yatove chokwadi. Muna Ndira, Patronpath iri kufambisa zvigadzirwa zvedu zvekugadzira kupinda Bluelock. Inyika nyowani (sekutaura kweshambadziro padivi rerutivi).
Iyo yekurumbidza kwakakwana kune Software seSevhisi (Saas). Iwo SaaS makambani andakashandira anogara achiisa zviyero pane Hardware uye zvikwata zvevanhu kuti vatsigire. Bluelock ndiyo mhinduro chaiyo kwatiri sezvo isu tichigona kukura bhizinesi redu tisinganetseke nezve yedu yezvivakwa kana zvihombe zviwanikwa zvinoenda nazvo. Iri kuburitsa kunze kunetseka!
Zvigadziriso seSevhisi (IaaS) ibhizimusi riri kusimukira iro rinokutendera iwe kuti utenge zviwanikwa zveIT kubva kumupi weIaaS semutengo wakatarwa pamwedzi. NeIaaS, pachinzvimbo chekutenga murwi wemaseva neSAN, unogona kukwereta makumi matanhatu processor macres, maviri terabytes ekuchengetedza uye makumi matanhatu nemana gigabytes ekurangarira uye kuribhadharira pamwedzi kana mukota. Iyi nharaunda ndizvo chaizvo zviri kutaurwa naNicholas mubhuku rake. Tiri kutenga bandwidth, diski nzvimbo uye simba rekugadzirisa sekunge tiri kutenga chero chimwe chinhu chinoshandiswa.
Vazhinji vatengesi veIaaS vanomhanya VMWare kana yakafanana sisitimu yekushandisa pane inogonesa kuona. Iyi yekushandisa system nzira ndiyo kiyi yekuisa shim pakati pehardware uye nharaunda yako inobvumidza iyo kuyera, kufamba-famba, kudzokororwa, nezvimwewo ndizvo zvinoita kuti mupi weIaaS asiyane neyechinyakare webasa mupi kana nzvimbo yekutambira.
Tiri kugadzira Iyo Big switch pakupera kwaNdira. Tora kopi yebhuku racho uye upe Bluelock runhare.
PS: Ichi hachisi chitsigiro chakatumirwa ... chimwe chinhu chandaida kugovana nekuti ndiri kufara kwazvo nezve kufamba!
Tags: chinangwamotohr 1981Kim dotcommegauploadnapsterpiracyPiratepirate baykuba
Dec 23, 2007 pa 12: 14 AM
Asi BlueLock inoita kunge inotsigira saiti…
Zvisinei, nei uchireva BlueLock uye usingataure nezveEEC2, S3, uye SimpleDB yeAmazon?
Dec 23, 2007 pa 11: 31 AM
Bluelock haisi kubhadhara iyo posvo kana nzvimbo yekutsigira. Ini ndinopa dzimwe shamwari dzangu uye vandinoshanda navo nemubhadharo wekuiswa dzimwe nguva. Zvichida ndinofanira kuitumidza "Shamwari & Sponsors".
Bluelock iripano muIndiana - iwe uchaona kuti ini ndinoedza kubatsira neIndiana kutanga uye tekinoroji makambani.
Basa reAmazon harisi Infrastructure seSevhisi, iwo maWebhu Services. Musiyano ndewekuti nharaunda yangu haisi kudhonza kubva ku'gore '(izwi reAmazon) uko nharaunda yangu yakagovaniswa nemazana kana zviuru zvevamwe.
NaBluelock tichava nemaseva akazvitsaurira, diski nzvimbo, mapurosesa uye bandwidth. Isu tiri munzvimbo yakasarudzika - saka tinogona kudzokorora nharaunda yedu pazvinenge zvichidikanwa.
Isu takavimbisa SLA's, Industry Standard Security Compliance, firewalls, intrusion detection, console access, 24/7 kuongorora uye kutsigira, vaulted backups, redundant power… unozvitumidza.
Ndinovimba zvinobatsira! Maona Bluelock nokuti mamwe mashoko.
Zvita 23, 2007 na12: 05 PM
Mushure mekuongorora kwako kunopenya, pamwe BlueLock inofanira kuzova mubatsiri anobhadhara… 😉
@Douglas: Kubatsira Indiana
Ini ndinonzwisisa, ini ndinoita zvakafanana muAtlanta, GA (ona http://web.meetup.com/32/)
@Douglas: Amazon haisi basa rezvivakwa
Kunyangwe isiri padanho rakaenzana reBlueLock sezviri pachena, asi iyo EC2 haisi zvigadzirwa?
Dec 23, 2007 pa 11: 20 AM
@Mike Pane kusangana pakati pezvipo zveAmazon EC2 / S3 / SimpleDB neBlueLock. Asi kazhinji kutaura, iwo mhinduro dzakasiyana dzakasiyana, uye anonongedzera vateereri vakasiyana.
Iwe haugone kumisikidza sumbu reAmazon pasina huwandu hwakaringana hweruzivo rwehunyanzvi, uye ungazoda dhizaina chimwe chinhu kugadzirisa akasiyana EC2 zviitiko. Iwe zvakare unomhanya mune akati wandei matambudziko angangoda kugadziriswa mukushandisa, senge chokwadi chekuti EC2 zviitiko hazvina static IPs, kuti hapana yekuchengetedza kwenzvimbo pane EC2 semuenzaniso, iyo S3 yekuchengetedza inononoka kupfuura SAN kana local disk, uye iyo SimpleDB haigamuchire mibvunzo yeSQL kana kubvumira kujoina kwakaoma. EC2 uye SimpleDB vachiri mubeta izvozvi (neiyo yekupedzisira mune yakavanzika beta), saka hapana maSLAs - kwete chaicho chinhu chaungade kubatisisa rako rekugadzira rakakosha bhizinesi pairi.
BlueLock inonyanya kukupa iwe kudonhedza-kutsiva rack yeWindows uye / kana maLinux maseva asina misoro yekuzvigadzirisa, kana kugadzirisa zvekare application yako kuti igone kuitirwa kuAmazon. Iwe zvakare tanga kutaura nevanotsigira mainjiniya parunhare.
Izvo zvakati, Amazon yakanyanya kudhura kuti utange nayo, uye BlueLock inogona kunge isingakwanise kudhura kana uchingomhanya maseva mashoma. Iyo zvakare inobhadhara-se-iwe-shandisa, nepo BlueLock mitengo iri senge yechinyakare dhata nzvimbo kwaunogadzika chirongwa chekubhadhara kune imwe huwandu hwecpu / disk / bandwidth / nezvimwewo kana usingashandise ese iwo mwedzi wega.
Disiki: Ndinoziva vanhu vashoma vanoshanda kuBlueLock. Asi ndiri kushingairira kushandisa Amazon S3 mukugadzira, ndiri fan hombe weEC2 (mune chaiyo kesi), uye ndiri kumirira nemoyo wese wangu SimpleDB yakavanzika beta kukoka.
Zvita 23, 2007 na12: 08 PM
Kutenda nemhinduro Ade. Ini ndanga ndichizokumbira Douglas kuti anyore tsamba yekufananidza uye nekusiyanisa BlueLock neAmazon web services asi hapana chinodiwa izvozvi sezvawatoita!
PS Imi maIndia munonamatira pamwechete, doncha? 🙂
Zvita 23, 2007 na12: 21 PM
Ha! Hongu tine chokwadi chekuita, Mike!
Ndiyo imwe yenzvimbo idzo diki zvakakwana kuti kune mashoma kwazvo madhigirii ekuparadzanisa pakati pemakambani maviri kana vanhu. Tiri kuyedza zvakaoma kusimbisa hukama uhu uye nekuronga mudunhu zvakare.
Ndiyo nharaunda yakakwana yekutanga tech tech nekuti mutengo wekugara uye mutero mabhenefiti akanaka kwazvo. Inofananidzwa nenyika, zviri 20% yakaderera mutengo paavhareji. Ndiro izwi ratinoda kubuda! Iyo MidWest mafungiro ekushanda nesimba uye basa rakakura musiyano mukuru zvakare.
Mudiki Indiana ndiyo network nyowani yemagariro yakatangwa kuronga zvirinani mabhizinesi mudunhu.
PS: Ndiri kufara Ade akapinda. Tiri kuenda kuBluelock saka handifanire kuziva misiyano yese 😉
Zvita 23, 2007 na12: 42 PM
@Douglass: Iyo inzvimbo yakakwana yekutanga kambani yehunyanzvi sezvo mutengo wekurarama uye mutero mabhenefiti akanaka kwazvo. Inofananidzwa nenyika, zviri 20% yakaderera mutengo paavhareji. Ndiro izwi ratinoda kubuda! Iyo MidWest mafungiro ekushanda nesimba uye basa rakakura musiyano mukuru zvakare.
Asi ipapo unofanirwa kugara mukati Indiana godforbid…. (ndine hurombo, handina kukwanisa kuramba '-)
Zvisinei, zvinoita sekunge iwe unofanirwa kuenda kunodana Chamber of Commerce semunhu anotevera kutsigira… 🙂
Zvita 23, 2007 na1: 55 PM
Kutenda nekomputa sechiitiko chekushandisa. Zvinoita zvine musoro uye nekukasira inoisa IaaS mukutarisa. Ini ndinotenda iyo posvo kunyangwe neakasarudzika kurapwa kweBluelock :).
Kunaka post Doug.
Happy mazororo kune vese.